Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Teknolojia fitsangatsanganana: Be amin'ny tsenan'ny dia Arabian
Teknolojia fitsangatsanganana lehibe eo amin'ny tsenan'ny Travel Arabian
Miara-miasa amin'i Amadeus, Travel Forward Theatre dia mandray an'i Google, Skyscanner, Travelport, Hilton Hotel, Expedia Group ary bebe kokoa amin'ny ATM any Dubai.
Andalana iray manokana an'ny marika fivahinianana lehibe no haseho afaka andro vitsivitsy ao amin'ny tsena fitetezana arabo any Dubai.
Ity hetsika 4 andro ity dia manomboka amin'ny: Ny fampiharana ny haitao hampifanarahana amin'ny zava-misy vaovao.
Ny hotely dia hisolo tena ny hetsika ihany koa satria ny tontolon'ny fandraisam-bahiny miresaka momba ny fomba hanohanana ny angona sy ny haitao ny dia manokana.
Mandrosoa, hetsika manerantany momba ny teknolojia fitsangatsanganana, dia nanambara tsipika mahavariana marika marika lehibe hanehoana mivantana eny an-tsehatra ho ampahany amin'ny hetsika rahavavy Tsena fitsangatsanganana arabo (ATM).
Hetsika hybrid ny ATM amin'ity taona ity. Mandrosoa dia ampahany amin'ny hetsika manokana natao tao amin'ny Dubai World Trade Center tamin'ny 16-19 Mey 2021, iarahana amin'ny ATM Dubai.
Ny ATM Virtual dia hitranga amin'ny 24-26 Mey ary ny fivoriana rehetra avy amin'ny hetsika mivantana dia ho hitanao mandritra ny hetsika virtoaly.
Miara-miasa amin'ny powerhouse amadeus teknolojia fizahan-tany, Teatra Mandrosoa amin'ny dia handray an-tanana ny filoha lefitry ny mpivarotra ambongadiny ho an'i Moyen Orient sy Afrika, Jamel Chandoul, izay hiresaka ny fomba ahafahan'ny fiaraha-miasa manampy amin'ny fanarenana ny indostrian'ny fizahan-tany amin'ny alàlan'ny teknolojia hanomezana traikefa amin'ny dia lavitra sy azo antoka kokoa ny mpandeha.
Ny fivoriana dia mijery ny ahiahin'ireo mpitsangatsangana, anisan'izany ny fampiharana ara-pahasalamana. Ny alatsinainy 17 mey manomboka amin'ny 13:30 - 14:30 no hanatanterahana izany.